Firaondraonan’ny bilaogy ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2018 14:12 GMT
(Marihina fa tamin'ny 25 Septambra 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny zava-nitranga manerana izao tontolo izao avy amin'ny bilaogy Bangladeshi :
* Fanabeazana: Nanakiana ny rafitry ny fanadinana farany an-tsekoly -S.S.C. (Ambaratonga faha-10) any Bangladesh i Tanvir avy ao amin'ny bilaogy Journal of a Disturbed Mind. Maro ny mpianatra any amin'ny faritra sasany no mahazo ny isa ambony amin'ny GPA 5 kanefa tsy tafiditra any amin'ny oniversite ambony izy ireo noho ny tsy fahafahany amin'ny fanadinana fifaninanana.
* Politika: Naneho ilay mpanao gazety Tasneem Khalil fa mety ho raharaha mahatohina indraindray ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo mpikatroka mpanohitra .
Ireo sary sasantsasany tao amin'ny bilaogy Suchinta mampiseho ny fihetsiky ny polisy .
Nanakiana ny fanafahana madiodio an'ilay mpanao didy jadona teo aloha Hossain Muhammad Ershad ny bilaogy Share the magic, noho ny hetsika ara-politika nataon'ny governemanta ankehitriny (2006) hoe nofoanan'ny mpisolovavan'ny governemanta ny fiampangana azy ho nanao kolikoly.
* Ny zon'ny fananahana: Nitatitra i Tasneem Khalil fa mbola ampiasaina any amin'ny firenena Azia Atsimo (India, Pakistana, Bhutan, Nepal ary Bangladesh) mba handavana ny fahapelahana ny lalànan'ny fanjanahantany Britanika (Andininy faha 377 amin'ny fehezan-dalàna famaizana) tamin'ny taonjato faha-19.
* Loza voajanahary: Nitsikera ny fomba namonjena ireo Bangladeshis tsy hita popoka tany amin'ny faritra amorontsiraka sy ireo naratra mafy taorian'ny rivodoza tamin'ny 19 Septambra 2006 i Dristipat .
* Fivavahana: Nitatitra i Shafiur avy ao amin'ny imperfect|world|2006 fa natsangana ho olo-masina voalohany tao Bangladesh Itompokolahy Theotonius Amal Ganguly, arseveka Bangladeshita.
* Kolontsaina: Ny ‘Shab-e-Barat’ (ny alin'ny vintana tsara) dia nankalazain'ny Miozolomana tamin'ny andro faha-15 ny Shaban (volana fahavalo amin'ny fanisan'andro islamika) tany amin'ny firenena Indiana Atsimon'ny Kaontinanta (Bangladesh, India , Pakistana ary Afganistana) niaraka tamin'ny fivavahana makotrokotroka.
Nanontany tena i Shaon hoe moa ve misy fototra ara-pivavahana ny fankalazana ity alina ity, sa fomba amam-panao ara-kolontsaina madiodio izany .
* Fiainan'ny mahantra: Ankoatra ireo olo-malaza dia tsy dia mahalala loatra ny fomba iainana any Bangladesh ny olona. Manoritsoritra ny vahoaka Bangladeshita miasa – mpanosika posy telo sy mpivarotra akondro i Razib Ahmed avy ao amin'ny South Asia Biz.
* Kolikoly: Mizara vaovao bebe kokoa momba ny kolikoly mitranga any Bangladesh ny bilaogy Suchinta.
* Laza: Mizara ny zavatra niainany nandritra ny andro iray niaraka tamin'ny mpitarika Bodista Dalai Lama i Shafia ao amin'ny People Tree .
* Any am-pielezana: Nanakiana ireo Bangladeshita tsy monina ao an-toerana i Imtiaz , izay tsy mieritreritra ny hiverina hody any an-tanindrazany fa mitaky hatrany ny fanampian'ny firenena ara-tsosialy.